ललितपुरमा दुई दिनको शिशुसहित एकै परिवारका ५ जनाको मृत्यु – Nep Stok
ललितपुरमा दुई दिनको शिशुसहित एकै परिवारका ५ जनाको मृत्यु
फागुण २३, २०७८ सोमबार 402
काठमाडौ । ललितपुरमा एकै घरका ५ जनाको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । घटनामा एउटा २ दिने शिशु पनि रहेको प्रहरीले जनाएको छ । .ललितपुरको कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका–वडा नम्बर ४ मा एकै घरका ४ जना मृ त फेला परेका थिए भने एक जनाको उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी बसन्त कुँवरले ४ जनाको घटनास्थल र थप एक जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सोमबार बिहान ४ जना घरमै शंकास्पद अवस्थामा मृ त फेला परेका थिए भने थप एक जनालाई उपचारका लागि पाटन अस्पताल लगिएको थियो ।
प्रहरीले घटनास्थलमा वि षको जस्तो बट्टा फेला पारेको जनाएको छ भने यसबारे अनुसन्धान सुरु भएको जनाएको छ । दुई जनालाई उपचारका लागि पाटन अस्पताल लगेको थियो । जस मध्य दुइ दिने शिशुको निधन भएको हो । यस्तै घरमुली शुभ स्याङतानको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ।
एसएसपी कुँवरका अनुसार घटनास्थलमै ५५ वर्षीय काँइली स्याङतान, ९ वर्षीय आशिष स्याङतान, २४ वर्षीय शुष्मा स्याङतान र ७ वर्षीय आष्मा स्याङतान मृ त फेला परेका थिए । स्थानीयले घटनाबारे थाहा पाएपछि प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो । फाइल तस्बिर
Prevअभिनेता सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठ विवाह गर्दै…
Nextघरधनी थापा दम्पत्तिले पल र बालिका राति एउटै कोठामा बसेको बयान
इश्वरले नै हात थाप्नेपछी हावामा अडिरह्यो बस : यात्रुले भरिएको बस अत्यासलाग्दो भीरमा खस्नै लाग्दा भयो अचम्मको घटना !
बलात्कारमा दोषी ठहरिए पल शाहलाई कति हुन्छ सजाय, कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया? (हेर्नुहोस भिडियो)